News - Sida fanku u caawiyo
Qalabka kuleylku wuxuu ubaahan yahay hawo joogto ah oo hawadu maraan salkeeda si ay sifiican ugu qaboojiso. Markuu gaarigu dhaqaaqayo, tani waxay dhacdaa si kasta; laakiin markii ay taagan tahay taageere ayaa loo isticmaalaa inuu ka caawiyo hawo-mareenka.
Fanku waxaa laga yaabaa inuu kaxeeyo mashiinka, laakiin haddii matoorku uusan si adag u shaqeyneyn, had iyo jeer looma baahna inta gaarigu socdo, marka tamarta loo adeegsado wadista waxay baabisaa shidaalka.
Si taas looga gudbo, gawaarida qaar waxay leeyihiin muuqaal isku dhafan oo dareeraya xajin ka shaqeeyey kulayl xasaasi ah oo heerkul ah oo qariya marawaxadda ilaa heerkulka qaboojinta uu gaaro meel go'an.
Gawaarida kale waxay leeyihiin marawax koronto, sidoo kale waxaa shidaaya ama dami kara dareeraha heerkulka.
Si mishiinku si dhakhso ah ugu kululaado, hiitarka waxaa xiraya kuleylka, badiyaa ku fadhiya matoorka korkiisa. Heerkulka kulku wuxuu leeyahay baaldi ay ka shaqeeyaan qol ay ka buuxaan shey.
Markuu mashiinku diiriyo, waxku dhalaalayo, fidiyaa oo riixayaa waalka furfuran, oo u oggolaanaya coolantu inay ku dhex gasho qalabka hiitarka.
Markuu matoorku istaago oo uu qaboobo, marinka ayaa mar kale xirmaya.
Biyuhu way fidayaan marka ay barafoobaan, oo haddii biyaha ku jira matoorku uu barafeeyo waxay dumin karaan barta ama hiitarka. Sidaa daraadeed xasaasiyada badanaa intarnetka ethylene glycol ayaa lagu daraa biyaha si ay ugu yareyso dhibicda qaboojinta ilaa heer aamin ah.
Aaladda qaboojiyaha waa in aan la mayrin xilli kasta; caadi ahaan waxaa looga tegi karaa laba ama saddex sano.